musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Egypt Kudzokorora Nhau » Vols kubva kuRussia kuenda kuEgypt Gungwa Dzvuku Resorts Resume
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Egypt Kudzokorora Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Russia yakatangazve nendege dzakananga kuenda kunzvimbo dzekuchengetera dzeGungwa Dzvuku dzeEgghada neSharm el-Sheikh, zvichipedza kurambidzwa kwainge kwatora makore angangoita matanhatu zvichitevera kuputika kwendege yeRussia yakauraya vanhu vese makumi maviri nevaviri.
Ndege nhatu dzakananga kubva kuMoscow dzakasvika mumaguta maviri evaIjipita ekushanyira nemusi weMuvhuro.
Hurghada akagamuchira maviri evashanyi nendege kubva kuRussia.
Sharm el-Sheikh akagamuchira kutanga kutiza kubva kuRussia mumakore matanhatu.
Ministry yeEgypt Aviation Ministry yakazivisa izvo zvitatu yakananga nendege kubva kuMoscow dzakasvika mumaguta maviri evaIjipita ekushanyira nezuro, Hurghada achigamuchira vaviri vavo uye Sharm el-Sheikh achitambira imwe.
Russia yakazopedzisa kurambidzwa kwayakaenda kuEgypt iyo yakanga yatora makore angangoita matanhatu, zvichitevera kuputika kwendege yeRussia yakauraya vanhu makumi maviri nevaviri vari muchikepe, ndokutangazve nendege dzakananga kubva kuMoscow kuenda kunzvimbo dzekuRwizi rweGungwa Dzvuku dzeHurghada uye Sharm el-Sheikh musi weMuvhuro.
“Ndege nhatu dzakaratidza kutanga kweiyo nhanho nyowani yekutangazve kushanya kweRussia kumaguta maviri eRed Red resort e Hurghada uye Sharm El-Sheikh, ”Gurukota rezvevashandi vezvekufambisa zvinhu muEgypt vakataura muchitauti.
Ndege dzeRussia dzakatambirwa nemhemberero dzemvura sarupu setsika yekutambira nendege nyowani mushure mekumhara, nepo vashandi vepanhandare vakagamuchira vashanyi nemaruva, zviyeuchidzo, uye mimhanzi yechinyakare.
Ndege dzakananga dzinoenda kuRed Sea resorts zvinowedzerwa kune dzese dzinoenderera nendege pakati peCairo neMoscow, nechinangwa chekukwezva huwandu hwakakura kwazvo hwevashanyi veRussia kuEjipitori, Abul-Enein, CEO weEgyptAir Airlines akadaro.
Kune nomwe nendege dzakananga kuIgungwa Dzvuku maguta ekushanyira pasvondo, uye imwe neimwe inokwana vatasvi makumi matatu negumi kuti vasangane nezvinotarisirwa nevashanyi veRussia, nepo ndege dzeRussia dzichironga nendege shanu panguva imwecheteyo, akadaro.
Russia iri pakati pemisika yakakosha yekushanya kuenda kuEjipitori, sezvo huwandu hwevashanyi vayo kuenda kuEgypt hwakapfuura mamirioni 3.1 muna2014, ingangoita 33 muzana yevashanyi vakapinda gore iro, akadaro Lamia Kamel, mutevedzeri gurukota rezveKushanya uye Zvekare Yekusimudzira.
Akasimbisa kuti vese vashandi mumahotera, nzvimbo dzevaraidzo uye mamiziyamu vakabaiwa jekiseni ku COVID-19.
"Vashanyi veRussia vakafara kudzokera kuHurghada neSharm el-Sheikh kuti vanakirwe nemabhichi ane zuva, mamiriro ekunze anoshamisa, pamwe nemabasa egungwa," Kamel akadaro.
Kuwedzera kwekushanya kwevashanyi kuchabatsira mukugadzira mabasa matsva muEjipitori, kunyanya panguva yedenda, nenhamba dzendege dzakananga kubva kuRussia kuenda kuHurghada uye Sharm el-Sheikh pakupedzisira ichikwira kusvika makumi maviri pasvondo.
Muna Gumiguru 2015, Russia yakamisa nendege dzakananga kuenda kunhandare dzendege dzeEjipitori zvichitevera tsaona yendege yekuRussia kuNorth Sinai. Kubva ipapo, Egypt yakashanda mukusimudzira kwayo chengetedzo uye matanho ekuchengetedza kunhandare dzese dzenyika.
Muna Kubvumbi 2018, Russia yakatangazve ndege pakati Moscow uye Cairo, asi akachengetedza kurambidzwa kwendege dzinoenda Hurghada uye Sharm el-Sheikh.